‘किटानी दिँदा पनि प्रहरीले आरोपी पक्राउ गरेन’
बिहिबार, १५ माघ, २०७७
हाम्रो कृषि / पर्यटन
विराटनगर । अदालतको अपहेलनामा कार्वाही हुने भयले जालझेल चोरी आरोपमा मोरङ प्रहरीले १० महिनापछि किटानी जाहेरी दर्ता गरेपनि आरोपी पक्राउ गर्न अझै चासो नदिएको जाहेरवालाले गुनासो गरेका छन् ।
ईँटाभट्टा व्यावसायमा साझेदार रहेका विराटनगरका विष्णु मैनालीलगायत ५ जना विरुद्ध चोरी गरेर ईँटा बिक्री गरेको र जालझेल गरेर १ करोड २० लाख रुपैयाँ हानीनोक्सानी पु¥याएको आरोपमा किटानी जाहेरी परेको छ ।
मोरङ प्रहरीले अदालतको मानहानी हुने डरले जाहेरी दर्ता गरेपनि आरोपीहरुलाई भने पक्राउ गर्न चासो नदिएको जाहेरवाला विराटनगर ५ का प्रकाश बजगाईको गुनासो छ । किटानी जाहेरी दिएका आरोपीहरु खुलेआम आफनो व्यापार व्यवसाय गरिरहेको र आफूहरुलाई धाकधम्की दिने गरेकोले असुरक्षा बढेको जाहेरीकर्ता प्रकाशका दाजु विकासले बताउनुभयो ।
प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरीमा उल्लेख भए अनुसार विराटनगर २ का भीष्म भनिने ६० वर्षीय बिष्णुप्रसाद मैनाली, विराटनगर ३ का ७० वर्षीय उद्धवप्रसाद रिजाल, विराटनगर ३ मुनालपथ बस्ने हरिप्रसाद पराजुली, विराटनगर २ का लिलाप्रसाद पराजुली र भुपराज पराजुलीले मिलेर साझेदारी उद्योगमा उत्पादन भएको १० लाख ईँँटा जालझेल गरि चोरी गरेको जनाइएको छ । उक्त ईटा बिक्रि गरी १ करोड २० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप जाहेरबाला बजगाईं दाजुभाइको छ ।
सुरुमा जाहेरी बुझ्न नै आनाकानी गरेको प्रहरीले उच्च अदालत विराटनगरको परमादेशपछि पनि जाहेरी दर्ता गर्न मानेको थिएन । जाहेरी दर्ता नभएपछि बजगाईं दाजुभाई अदालतको मानहानी भएको भन्दै पुनः निवेदन गर्न पुगेका थिए । अदालतले जाहेरी दर्ता नगर्ने कारण प्रहरीसँग माग गरेपछि कार्वाही हुने भयले १० महिनापछि मोरङ प्रहरीले पुस ९ पुस गते जाहेरी दर्ता गरेको थियो ।
जाहेरी दर्ता भएपनि आरोपीहरु पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाउन अझै प्रहरीले आलटाल गरिरहेकोले आफूहरु असुरक्षित भइरहेको जाहेरबाला दाजुभाइहरु प्रकाश र विकासको गुनासो छ । मोरङ प्रहरीका एसपी सन्तोष खड्काले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गरेपनि अदालतले आरोपीलाई पक्राउ गर्नु नभनेकोले कसैलाई पक्राउ नगरेको बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले फौजदारी कसुरमा दर्ता भएका कुनैपनि जाहेरीका आरोपीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । ‘अनुसूचीभित्रको फौजदारी कसुरमा जाहेरी दर्ता गर्नु भनेपछि पक्राउ गर्नु भनेर अदालतले भनिरहन पदैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रहरीले अनुसन्धान नगर्न आलटाल गरेको हो ।’
बजगाई दाजुभाईका अनुसार उनीहरुका बाबु टिकाप्रसादले मोरङको कटहरी गाउँपालिकाको भौडाहामा साझेदारीमा ईटा व्यवसाय गरेका थिए । २०७३ मा टिकाप्रसादको मृत्यु भएपछि उनकी श्रीमती सावित्रादेबी हकदार भएपनि साभेदारहरुले ईटाभट्टा र जमिन सबै आफूहरुको भन्दै एकलौटी कारोबार गरेर मुनाफा उपभोग गरेका थिए ।
साबित्राले आफ्नो भागको एक सय कित्ता शेयर बिक्रि गरेकोमा शेयर बिक्रिवापत दिनुपर्ने १५ लाख रकम पनि साबित्रालाई झुक्याएर खाली चैकमा सही गराएर बिष्णुले नै हडपेको बजगाई परिवारको आरोप छ । उद्योग स्थापना भएको १ बिगाहा ४ कठ्ठा जमिन साझेदारीले बिक्रि गर्ने योजना बनाएकोको थाहा पाएपछि छोराहरु प्रकाश र विकासले उच्च अदालत गुहारेका थिए ।
अदालतले जग्गा बजगाई परिवारकै नाममा कायम गराउँदै सम्पत्ती नबेच्न र नमास्न निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । निषेधाज्ञा जारीपछि साझेदारहरुले भण्डारण गरेर राखिएको १० लाख ईँटा एकलौटी बिक्रस् गरेका थिए । त्यसपछि न्याय माग्दै अदालत पुगेपछि बजगाई परिवारलाई उच्च अदालतले कानून अनुसार हकअधिकार दिनु भनेको छ ।
आदेशपछि बजगाई दाजुभाईले साझेदारहरुले दश लाख ईँटा चोरी गरेर बिक्री गरेको भन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दर्ता गराउन पुगेका थिए । तर, प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि उनीहरुले गत चैत ६ गते हुलाकमार्फत जाहेरी पठाए । तरपनि प्रहरीले चासो नदिएपछि जाहेरी लुकाउनेलाई कार्वाही गर्न माग गर्दै बजगाई दाजुभाईले अर्को पत्र हुलाकमार्फत पठाए ।
प्रहरीले कुनै सुनवाई नगरेपछि बजगाईं परिवारले गत असार २ गते उच्च अदालत विराटगरमा किटानी जाहेरी दर्ता गराईपाउ भनेर दिएको निवेदनमा अदालतले परमादेश गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि बजगाईं दाइभाईले अदालतको मानहानी गरेको गत पुस ३ पुस गते प्रहरी विरुद्ध रिट हाले ।
अदालतले मोरङ प्रहरीलाई परमादेश किन पालना नगरेको भन्दै कारण देखाउ आदेश गरेपछि मोरङ प्रहरीले पुस ८ गते जाहेरी दर्ता गरेको पत्र पठाएको छ । अदालतको आदेश पालना नगरेको मुद्दामा कार्वाहीमा पर्ने भयले प्रहरीले किटानी जाहेरी दर्ता गरेपनि आरोपीहरुमाथि कार्वाही चलाउन भने चासो दिएको छैन ।
साझेदारीबापतको १५ लाख रुपैयाँ दिने बहानामा बैंक चेकमा सही गराएर पछि आफैंले पैसा निकालेर अपचलन गरेको मुद्दामा विष्णु मैनाली, उनकी श्रीमती र उद्योगका एक कर्मचारीलाई जिल्ला अदालत मोरङले जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ ।
मङ्गलबार, २८ पुष, २०७७, बिहानको ११:४० बजे
प्रतिक्रिया: Cancel reply
प्रधानमन्त्रीद्वारा अदालतको मानहानी सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाई
विराटनगर । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको प्रधानमन्त्री र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश विरूद्ध अदालतको मानहानी गरेको मुद्दामा सुनुवाई सुरु भएको छ । बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा दुवै मुद्दामा सुनुवाई सुरु भएको हो । गत माघ ११ गते वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार
पशुप्रिय प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गरौं
एनजिओहरु सक्रिय भएको बेला पशु अधिकारका बारेमा बाक्लै कुरा उठ्थे । तिनका स्रोत सुक्दै गएपछि पशुका सवालमा मन्दी आयो । अभियान्ताहरुले सकेको गरेकै छन् तर पशुका बारेमा उनीहरुका बोली मधुरोमात्र सुनिन्छ । पछिल्ला केही दिनयता पशुका बारेमा फेरी चर्चाहरु बढेका
अविश्वासको प्रस्ताव शतप्रतिशत पारित हुने आचार्यको दावी
विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश १ का इन्चार्ज भीम आचार्यले प्रदेशसभा सचिवालयमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने बताउनुभएको छ । नेकपा प्रदेश १ कमिटीको तर्फबाट बुधबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता आचार्यले विपक्षी
ओलीले प्रधानमन्त्री चलाउन नजानेको ठहर
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनविरूद्ध संघर्ष गर्न भन्दै विराटनगरका ११० प्रबुद्ध नागरिकहरुले समिति निर्माण गरेका छन् । वाम बुद्धिजीवी एवम् प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका नेतृत्वमा गठन भएको प्रबुद्ध नागरिक अभियान समितिमा प्राध्यापक, अधिवक्ता, पत्रकार तथा अन्य पेशाका
विराट मेडिकल कलेजको रकम हिनामिना
विराटनगर । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–२ स्थित विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटलको लाखौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा प्रशासकीय अधिकृतसहित दुई जना पक्राउ परेका छन् । फर्जी कर्मचारी देखाएर लाखौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा विराट मेडिकल कलेजका प्रशासकीय अधिकृत जनकपुर–८ घर
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिन सुरु
विराटनगर । आजदेखि प्रदेश १ का ८ वटा जिल्लाका १९ वटा खोप केन्द्रबाट कोरोना विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको छ । प्रदेश १ मा मोरङस्थित विराटनगरको कोशी अस्पतालका सुपरिटेण्डेन चुमनलाल दासलाई उक्त कोभिशिल्ड खोप लगाएर सुरु गरिएको हो । दोस्रो
तरूण दल मोरङका कोषाध्यक्ष अनिल रिजाल पक्राउ
मुख्यमन्त्रीको विवाह, यस्तो देखियो जोडी (फोटो)
कुखुरा तस्करीमा नेकपाका स्थानीय नेता नै संलग्न
उपभोक्ता ठगी गर्ने वर्कसप सञ्चालक पक्राउ
राराका बचतकर्ताद्वारा प्रहरीमा उजुरी
पूर्वेली जनसञ्चार सहकारी संस्थाद्वारा प्रकाशित हाम्रोमत दैनिकको सह–प्रकाशन
पान नं. ३०५६७२४८५
अध्यक्षः नवलप्रसाद उपाध्याय
प्रधान सम्पादकः विवेक गौतम
सम्पादकः अर्जुनकुमार आचार्य
विराटनगर – ९ , मोरङ
फोन न. ०२१-५१२७९०